"ဘာသာစကားသင်ယူလေ့လာနေသူအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် ရက် (၃၀) စာ Challenge”﻿
ဘာသာစကားတွေကို သင်ယူလေ့လာနေတဲ့ သူတွေအတွက် အကူအညီအထောက်ကူဖြစ်စေမယ့် Challenge လေးတစ်ခုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ ရက် ၃၀ ပဲ ကြာမှာပါ။
အခုပြောပြမယ့် ရက် (၃၀) စာ challenge လေးကို လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တာ့ သင့်ရဲ့ ဘာသာစကားသင်ယူမှုအတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာရာ ကအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့်ဒီ Challenge လေးကို လုပ်ကြည့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် အစအဆုံး လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ ကို အချိန် နာရီဝက် ..လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ပဲ ပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ် လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်Challenge လုပ်မယ့် ဘာသာစကားကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ရွေးချယ်ပါ။ ဘာသာစကားအားလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
တစ်ခုပြောချင်တာက Day2ကိုရောက်တာနဲ့ Day 1 လုပ်ရမယ့် အရာကို ဆက်လုပ်ရမှာပါ။ အဲ့လိုပဲ တစ်နေချင်းစီ လုပ်ရမယ့်အရာ ကတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးသွားမှာပါ။
ကဲ Challenge လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်................
Day 1 : ဘာသာစကားလေ့လာလို့ရတဲ့ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမဲ့ App တစ်ခုခု ကိုဒေါင်းပါ။ ဥပမာ ..Dulingo ဆို ဘာသာစကား တော်တော်များများလေ့လာလို့ရတဲ့ အတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ကိုယ်Challenge လုပ်မယ့် ဘာသာစကားရဲ့ ဝေါဟာရ အသစ် အလုံး ၁၀ လုံး ကနေ ၁၅လုံးထိ အလွတ်ရအောင် လုပ်ပါ။ ဘာသာစကားတွေ ပြောဆိုရာမှာလည်း ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝခြင်းက သင့်ကို အထောက်အကူ များစွာပြုပါတယ်။
Day2: File တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ File ထဲမှာ ဘာသာစကားလေ့လာ မှုအတွက် အကျိုးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေမှန်သမျှထည့်ပါ။
Day3: Social Media မှာ သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားတွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ Influencers တွေကို Follow လုပ်ပါ။
ဥပမာ ..သင်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာနေရင် facebook မှာ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ နေ့စဉ်ပို့ချပေးနေတဲ့ Page တွေ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကို Follow လုပ်ပြီး အမြဲစောင့်ကြည့်ပါ။
Day4: သင့်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ ၃ ခုကို သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ စာကြောင်း ၃ ကြောင်းရေးပါ။ ရေးတဲ့ အခါမှာလဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ သင်အမြဲလုပ်နေကျ အကြောင်းအရာကိုရေးပါ။ ရေးတဲ့ အခါမှာရေးပုံ ရေးနည်းတွေကို ကြည့်ပြီး ရေးလည်းရပါတယ်။
Day5: ကိုယ့်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကား နဲ့ သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်နားထောင်ပါ။ ပြီးရင် အဲ့သီချင်းရဲ့ စာသားတွေကို နားလည်အောင်လုပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ အသံထွက် ကို သေချာနားထောင်ပြီး လိုက်ဆိုနိုင်အောင်လည်းလုပ်ပါ။
Day6: Youtube မှာ သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် Youtubers တွေကို Follow လုပ်ပါ။ ဥပမာ DeDe burmese vlog ဆို တခါတလေ ဘာသာစကား သင်ယုမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် videos တွေတင်ပေးပါတယ်။
Day7: သင်လေ့လာနေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတစ်ခုခု ကိုဖတ်ပါ။ ဥပမာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ယောက်က ရေးထားတဲ့ Post တွေကို၊ ဆောင်းပါးတွေကို လိုက်ဖတ်ပါ။
Day 8 : ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကား ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်တဲ့ သူနဲ့ Chat ပါ။ အထူးသဖြင့် facebook မှာပေါ့။ သူ့ကိုလည်း ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ပြောခိုင်းပြီး ကိုယ်ကိုယ် တိုင်လည်း အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောပါ။ grammar တို့စားလုံးပါင်းမှားမှာ တို့အတွက် အရမ်းကြီး စိတ်မပူပါနဲ့။ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ သူဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ ပါးပါးပဲ ထားပါ။
AutoCAD သင်ကြားပေးသော Guide ဆရာ၊ ဆရာမများ >>> https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-228.html
Day9: သင့်ရဲ့ ဖုန်း၊ လက်တော့မှာ ရှိတဲ့ ဘာသာစကား Setting ကို သင်ယူလေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားပြောင်းပစ်လိုက်ပါ။ ဒီအချက်က အစပိုင်းပါ အနည်းငယ်တော့ ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မခက်ခဲဘူးလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာမှပြောင်းမသွား ပဲ ဘာသာစကားလေးတစ်ခုပဲ ပြောင်းသွားတာပါ။
Day 10 : သင့်အိမ်မှာ ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့label တွေလိုက်တပ်ကြည့်ပါ။ စာရေးလို့ရတဲ့ ကပ်ခွာလေးတွေဆောင်ထားပါ။ စာလေးတွေရေးပြီး လိုက်ကပ်ပါ။
Day 11 : သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ positive စာကြောင်း ၅ ကြောင်းရေးပါ။ ဥပမာ ကျွန်တော်ဒီနေ့ စောစောအိပ်မယ်။ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
Day 12 : သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကား နဲ့ negative စာကြောင်း ၅ကြောင်းရေးပါ။ Day 11 မှာရေးခဲ့တဲ့ positive စာကြောင်း ၅ ကြောင်းကိုပဲ negative အဖြစ်ပြောင်းရေးပါ။ positive နဲ့ negativeကြားက ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
Day 13 : သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကား ရုပ်ရျင်ကိုတစ်ခုခု ကိုကြည့်ပါ။ ကြည့်တဲ့အခါမှာ မြန်မာစာတန်းထိုးပြီးကြည့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ စကားအသံထွက်တွေ..စာလုံးတွေကို မှတ်နိုင်သလောက်လိုက်မှတ်ပါ။
Day 14 : day 13 မှာ ကြည့်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပဲ မြန်မာစာတန်းမထိုးတော့ပဲ ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားစာတန်းထိုးပြီးကြည့်ပါ။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာနေတာဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးပြီးကြည့်ပါ။ စာတန်းတွေကို ကြည့်ပြီး ဘာသာလိုက်ပြန်ကြည့်ပါ။ မရရင် google translateအသုံးပြုပါ။
Day 15 : သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ပက်သက်တဲ့ Grammar အချို့ကိုလေ့လာပါ။
Day 16 : သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအကြောင်းကိုရေးပါ။ ဥပမာ မနက်ဘယ်အချိန်ထတယ်၊ မနက်စာဘာစားတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့အပြင်သွားတယ်၊ ဘယ်နေရာကိုသွားတယ် အစရျိသဖြင့်ပေါ့။ အဲ့ဒီ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာတွေကို သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ရေးပါ။
Day 17 : သတင်းစာတွေဖတ်ပါ။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာနေတာဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ သတင်းစာ ဆောင်းပါးတွေကို day 17 ကစပြီးဖတ်ပါ။
Day 18 : တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ Chat ပါ။ Day 8 မှာလိုတော့ ကိုယ်နဲ့သိတဲ့ လူနဲ့မဟုတ်ပဲ။ ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားရဲ့နိုင်ငံသားနဲ့ Social Media ပေါ်မှာ စကားပြောပါ။ သင်ဟာ ဘာသာစကားလေ့လာနေဆဲ လူတစ်ဖြစ်ကြောင်းလဲ သူ့ကိုပြောပြပါ။
Day 19 : သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားရဲ့ TV Series တွေ၊ TV shows တွေ ကြည့်ပါ။
Day 20 : သင့်အတွက် ခက်ခဲနေသေးတဲ့ စာလုံးတွေကို စုပြီး list လုပ်ပါ။ ဥပမာ သင်ဂျပန်စာ ကို လေ့လာနေတာဆိုရင် သင့်အတွက် ခက်ခဲနေတဲ့ စာလုံးတွေကို List လုပ်ပြီး အဲ့စာလုံးတွေ ချည်းသီးသန့်ပြန်လေ့လာပါ။
Day 21 : သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားရဲ့  Native speakers တွေပြောထားတဲ့ Audio သီးသန့် file တွေကို podcasts မှာ Day 21 ကစပြီး နားထောင်ပါ။ Day 21ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် Native Speakers တွေရဲ့ အသံနဲ့ စကားလုံးတွေကို နားလည်သင့်သလောက်နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
Day 22 : သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ အကြောင်းကိုရေးပါ။ Day 16 မှာလို လွယ်လွယ် လေးတွေ မရေးတော့ပဲ၊ နည်းနည်းခက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ကိုရေးပါ။ ဥပမာ .. ဒီနေ့လိုင်းကားစီးရတာ အဆင်မပြေဘူး ကား ကကြပ် လိုက်တာ..အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
Day 23 : သင့်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားရဲ့ Social Media Group တွေကို Join ပါ။ ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ social media မှာ ဟာသGroupလေးတွေရှိသလို နိုင်ငံခြားမှာ လည်း အဲ့လို Groupတွေရှိပါတယ်။ အဲ့group တွေကို Join ပါ။ အဲ့ဒီခါကျရင် သူတို့ရဲ့ ဘန်းစကားတွေကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
Day 24 : day 24 ကစပြီး မြင်တဲ့အရာ မှန်သမျှကို ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ပဲတွေးပါ။ ဥပမာ ပန်းသီးကို မြင်ရင် apple အစရှိသဖြင့်ပေါ့ ။
Day 25 : ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးပါ။ ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ဝတ္ထု တစ်ပုဒ်ရေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဖတ်ခိုင်းပါ။ ဒီတခါရေးရင်တော့ သင့်တတ်ထားသမျှ အရာတွေကို အကုန်ထုတ်သုံးပြီးရေးပါ။ သူတို့ဆီ က feedback ပြန်ယူပါ။
Day26 : သင့်ဦးနှောက်မှာ ထိပ်ဆုံးမှတ်မိနေတဲ့ စာလုံး အလုံး ၅၀ ကိုချရေးပါ။ day 1 မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်နေ့ကို စာလုံး ၁၀ လုံး အလွတ်ကျက် တာဟာ အခု day 26 ရောက်တဲ့ အတွက် စာလုံး ၂၆၀ လောက်ရနေလောက်ပါပြီ။ အဲ့ဒီထဲက မှာ ထိပ်ဆုံးမှတ်မိနေတဲ့ စာလုံး (၅၀) ကိုချရေးပါ။
Day 27 : အဲ့ဒီ စာလုံး ၅၀ ကိုပဲ အသုံးပြုပြီး စာကြောင်းတွေရေးကြည့်ပါ။
Day 28 : ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း စကားပြောထားတာကို 3မိနစ်စာလောက် record လုပ်ပါ။ ပြန်နားထောင်ပါ။ ကိုယ်လိုအပ်နေတဲ့ အရာတွေကို ပြင်ပါ။
Day 29 : Native speakersတွေနဲ့ အပြန်အလှန်စကားပြောပါ။
Day 30 : day 30 ရောက်ရင်တော့ အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ Challengeကသင့်အပေါ် ဘယ်လောက်ထိ အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိတယ်၊ သင်လေ့လာနေတဲ့ ဘာသာစကား စွမ်းရည် ဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ တွေကို ချရေးလိုက်ပါတော့….
အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့.. ဘာသာစကားသင်ယူလေ့လာနေသူတွေအတွက် အထောက် အကူဖြစ်စေမယ့် ရက် ၃၀ စာ challenge လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာလုံးအတွက် အသုံးဝင်ပြီး Challengeလေး ပြီးမြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဘာသာစကားတှကေို သငျယူလလေ့ာနတေဲ့ သူတှအေတှကျ အကူအညီအထောကျကူဖွဈစမေယျ့ Challenge လေးတဈခုလုပျပေးခငျြပါတယျ။
ရကျ ၃၀ ပဲ ကွာမှာပါ။ အခုပွောပွမယျ့ ရကျ (၃၀) စာ challenge လေးကို လိုကျနာမယျဆိုရငျတာ့ သငျ့ရဲ့ ဘာသာစကားသငျယူမှုအတှကျ တဈထောငျ့ တဈနရောရာ ကအထောကျအကူဖွဈစမှောပါ။ ဒါကွောငျ့ဒီ Challenge လေးကို လုပျကွညျ့မယျလို့ ဆုံးဖွတျထားရငျ အစအဆုံး လုပျဖို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ တဈနေ့ ကို အခြိနျ နာရီဝကျ ..လေးဆယျ့ငါးမိနဈလောကျပဲ ပေးရမှာ ဖွဈတဲ့ အတှကျ အားလုံးအတှကျ အဆငျပွမေယျ လို့ထငျပါတယျ။ ကိုယျChallenge လုပျမယျ့ ဘာသာစကားကိုတော့ ကိုယျ့ဘာသာ ရှေးခယျြပါ။ ဘာသာစကားအားလုံးအတှကျ အဆငျပွအေောငျဖျောပွပေးထားပါတယျ။
တဈခုပွောခငျြတာက Day2ကိုရောကျတာနဲ့ Day 1 လုပျရမယျ့ အရာကို ဆကျလုပျရမှာပါ။ အဲ့လိုပဲ တဈနခေငျြးစီ လုပျရမယျ့အရာ ကတဈဖွညျးဖွညျးတိုးတိုးသှားမှာပါ။
ကဲ Challenge လေးကိုစလိုကျကွရအောငျ.....
Day 1 : ဘာသာစကားလလေ့ာလို့ရတဲ့ ကိုယျနဲ့ အဆငျပွမေဲ့ App တဈခုခု ကိုဒေါငျးပါ။ ဥပမာ ..Dulingo ဆို ဘာသာစကား တျောတျောမြားမြားလလေ့ာလို့ရတဲ့ အတှကျ ပိုပွီး အဆငျပွစေပေါတယျ။
တဈနကေို့ ကိုယျChallenge လုပျမယျ့ ဘာသာစကားရဲ့ ဝေါဟာရ အသဈ အလုံး ၁၀ လုံး ကနေ ၁၅လုံးထိ အလှတျရအောငျ လုပျပါ။ ဘာသာစကားတှေ ပွောဆိုရာမှာလညျး ဝေါဟာရ ကွှယျဝခွငျးက သငျ့ကို အထောကျအကူ မြားစှာပွုပါတယျ။
Day2: File တဈခုတညျဆောကျပါ။ File ထဲမှာ ဘာသာစကားလလေ့ာ မှုအတှကျ အကြိုးဖွဈစမေယျ့အရာတှမှေနျသမြှထညျ့ပါ။
Day3: Social Media မှာ သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားတှကေို သငျကွားပေးနတေဲ့ Influencers တှကေို Follow လုပျပါ။
ဥပမာ ..သငျကအင်ျဂလိပျဘာသာစကားကိုလလေ့ာနရေငျ facebook မှာ အင်ျဂလိပျနဲ့ ပကျသကျတဲ့ သငျခနျးစာတှေ နစေ့ဉျပို့ခပြေးနတေဲ့ Page တှေ ဆရာ၊ ဆရာမတှရှေိပါတယျ။ သူတို့ကို Follow လုပျပွီး အမွဲစောငျ့ကွညျ့ပါ။
Day4: သငျ့နဲ့ ပကျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာ ၃ ခုကို သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ စာကွောငျး ၃ ကွောငျးရေးပါ။ ရေးတဲ့ အခါမှာလဲ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ သငျအမွဲလုပျနကြေ အကွောငျးအရာကိုရေးပါ။ ရေးတဲ့ အခါမှာရေးပုံ ရေးနညျးတှကေို ကွညျ့ပွီး ရေးလညျးရပါတယျ။
Day5: ကိုယျ့လလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကား နဲ့ သီဆိုထားတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျနားထောငျပါ။ ပွီးရငျ အဲ့သီခငျြးရဲ့ စာသားတှကေို နားလညျအောငျလုပျပါ။ သူတို့ရဲ့ အသံထှကျ ကို သခြောနားထောငျပွီး လိုကျဆိုနိုငျအောငျလညျးလုပျပါ။
Day6: Youtube မှာ သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားတှအေတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမေယျ့ Youtubers တှကေို Follow လုပျပါ။ ဥပမာ DeDe burmese vlog ဆို တခါတလေ ဘာသာစကား သငျယုမှုအတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမေယျ့ videos တှတေငျပေးပါတယျ။
Day7: သငျလလေ့ာနတေဲ့ဘာသာစကားနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတဈခုခု ကိုဖတျပါ။ ဥပမာ နိုငျငံခွားသားတဈယောကျယောကျက ရေးထားတဲ့ Post တှကေို၊ ဆောငျးပါးတှကေို လိုကျဖတျပါ။
Day 8 : ကိုယျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကား ကိုကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြပွောတတျတဲ့ သူနဲ့ Chat ပါ။ အထူးသဖွငျ့ facebook မှာပေါ့။ သူ့ကိုလညျး ကိုယျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ပွောခိုငျးပွီး ကိုယျကိုယျ တိုငျလညျး အဲ့ဒီတိုငျးပဲပွောပါ။ grammar တို့စားလုံးပါငျးမှားမှာ တို့အတှကျ အရမျးကွီး စိတျမပူပါနဲ့။ ကိုယျနဲ့ရငျးနှီးတဲ့ သူဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျကိုပေါ့ပေါ့ ပါးပါးပဲ ထားပါ။
AutoCAD သငျကွားပေးသော Guide ဆရာ၊ ဆရာမမြား >>> https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-228.html
Day9: သငျ့ရဲ့ ဖုနျး၊ လကျတော့မှာ ရှိတဲ့ ဘာသာစကား Setting ကို သငျယူလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားပွောငျးပဈလိုကျပါ။ ဒီအခကျြက အစပိုငျးပါ အနညျးငယျတော့ ခကျခဲနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ မခကျခဲဘူးလို့လဲပွောလို့ရပါတယျ။ ဘာမှပွောငျးမသှား ပဲ ဘာသာစကားလေးတဈခုပဲ ပွောငျးသှားတာပါ။
Day 10 : သငျ့အိမျမှာ ရှိတဲ့ အရာဝတ်ထုတှကေို သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့label တှလေိုကျတပျကွညျ့ပါ။ စာရေးလို့ရတဲ့ ကပျခှာလေးတှဆေောငျထားပါ။ စာလေးတှရေေးပွီး လိုကျကပျပါ။
Day 11 : သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ positive စာကွောငျး ၅ ကွောငျးရေးပါ။ ဥပမာ ကြှနျတျောဒီနေ့ စောစောအိပျမယျ။ အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။
Day 12 : သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကား နဲ့ negative စာကွောငျး ၅ကွောငျးရေးပါ။ Day 11 မှာရေးခဲ့တဲ့ positive စာကွောငျး ၅ ကွောငျးကိုပဲ negative အဖွဈပွောငျးရေးပါ။ positive နဲ့ negativeကွားက ကှဲပွားခွားနားမှုတှကေို နားလညျလာပါလိမျ့မယျ။
Day 13 : သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကား ရုပျရငျြကိုတဈခုခု ကိုကွညျ့ပါ။ ကွညျ့တဲ့အခါမှာ မွနျမာစာတနျးထိုးပွီးကွညျ့ပါ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ရဲ့ စကားအသံထှကျတှေ..စာလုံးတှကေို မှတျနိုငျသလောကျလိုကျမှတျပါ။
Day 14 : day 13 မှာ ကွညျ့ခဲ့တဲ့ရုပျရှငျကိုပဲ မွနျမာစာတနျးမထိုးတော့ပဲ ကိုယျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားစာတနျးထိုးပွီးကွညျ့ပါ။ ဥပမာ အင်ျဂလိပျဘာသာစကား လလေ့ာနတောဆိုရငျ အင်ျဂလိပျစာတနျးထိုးပွီးကွညျ့ပါ။ စာတနျးတှကေို ကွညျ့ပွီး ဘာသာလိုကျပွနျကွညျ့ပါ။ မရရငျ google translateအသုံးပွုပါ။
Day 15 : သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ပကျသကျတဲ့ Grammar အခြို့ကိုလလေ့ာပါ။
Day 16 : သငျ့ရဲ့တဈနတေ့ာအကွောငျးကိုရေးပါ။ ဥပမာ မနကျဘယျအခြိနျထတယျ၊ မနကျစာဘာစားတယျ၊ ဘယျသူနဲ့အပွငျသှားတယျ၊ ဘယျနရောကိုသှားတယျ အစရြိသဖွငျ့ပေါ့။ အဲ့ဒီ ကိုယျ့ရဲ့တဈနတေ့ာတှကေို သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ရေးပါ။
Day 17 : သတငျးစာတှဖေတျပါ။ ဥပမာ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားလလေ့ာနတောဆိုရငျ အင်ျဂလိပျလိုရေးထားတဲ့ သတငျးစာ ဆောငျးပါးတှကေို day 17 ကစပွီးဖတျပါ။
Day 18 : တဈယောကျယောကျနဲ့ Chat ပါ။ Day 8 မှာလိုတော့ ကိုယျနဲ့သိတဲ့ လူနဲ့မဟုတျပဲ။ ကိုယျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားရဲ့နိုငျငံသားနဲ့ Social Media ပျေါမှာ စကားပွောပါ။ သငျဟာ ဘာသာစကားလလေ့ာနဆေဲ လူတဈဖွဈကွောငျးလဲ သူ့ကိုပွောပွပါ။
Day 19 : သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားရဲ့ TV Series တှေ၊ TV shows တှေ ကွညျ့ပါ။
Day 20 : သငျ့အတှကျ ခကျခဲနသေေးတဲ့ စာလုံးတှကေို စုပွီး list လုပျပါ။ ဥပမာ သငျဂပြနျစာ ကို လလေ့ာနတောဆိုရငျ သငျ့အတှကျ ခကျခဲနတေဲ့ စာလုံးတှကေို List လုပျပွီး အဲ့စာလုံးတှေ ခညျြးသီးသနျ့ပွနျလလေ့ာပါ။
Day 21 : သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားရဲ့ Native speakers တှပွေောထားတဲ့ Audio သီးသနျ့ file တှကေို podcasts မှာ Day 21 ကစပွီး နားထောငျပါ။ Day 21ရောကျနပွေီဖွဈတဲ့ အတှကျ Native Speakers တှရေဲ့ အသံနဲ့ စကားလုံးတှကေို နားလညျသငျ့သလောကျနားလညျလာပါလိမျ့မယျ။
Day 22 : သငျ့ရဲ့ တဈနတေ့ာ အကွောငျးကိုရေးပါ။ Day 16 မှာလို လှယျလှယျ လေးတှေ မရေးတော့ပဲ၊ နညျးနညျးခကျတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှေ ကိုရေးပါ။ ဥပမာ .. ဒီနလေို့ငျးကားစီးရတာ အဆငျမပွဘေူး ကား ကကွပျ လိုကျတာ..အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။
Day 23 : သငျ့လလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားရဲ့ Social Media Group တှကေို Join ပါ။ ဥပမာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ social media မှာ ဟာသGroupလေးတှရှေိသလို နိုငျငံခွားမှာ လညျး အဲ့လို Groupတှရှေိပါတယျ။ အဲ့group တှကေို Join ပါ။ အဲ့ဒီခါကရြငျ သူတို့ရဲ့ ဘနျးစကားတှကေို နားလညျလာပါလိမျ့မယျ။
Day 24 : day 24 ကစပွီး မွငျတဲ့အရာ မှနျသမြှကို ကိုယျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ပဲတှေးပါ။ ဥပမာ ပနျးသီးကို မွငျရငျ apple အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။
Day 25 : ဝတ်ထုတဈပုဒျရေးပါ။ ကိုယျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ဝတ်ထု တဈပုဒျရေးပွီး သူငယျခငျြးတှကေို ဖတျခိုငျးပါ။ ဒီတခါရေးရငျတော့ သငျ့တတျထားသမြှ အရာတှကေို အကုနျထုတျသုံးပွီးရေးပါ။ သူတို့ဆီ က feedback ပွနျယူပါ။
Day26 : သငျ့ဦးနှောကျမှာ ထိပျဆုံးမှတျမိနတေဲ့ စာလုံး အလုံး ၅၀ ကိုခရြေးပါ။ day 1 မှာ လုပျခဲ့တဲ့ တဈနကေို့ စာလုံး ၁၀ လုံး အလှတျကကျြ တာဟာ အခု day 26 ရောကျတဲ့ အတှကျ စာလုံး ၂၆၀ လောကျရနလေောကျပါပွီ။ အဲ့ဒီထဲက မှာ ထိပျဆုံးမှတျမိနတေဲ့ စာလုံး (၅၀) ကိုခရြေးပါ။
Day 27 : အဲ့ဒီ စာလုံး ၅၀ ကိုပဲ အသုံးပွုပွီး စာကွောငျးတှရေေးကွညျ့ပါ။
Day 28 : ကိုယျတဈယောကျတညျး စကားပွောထားတာကို 3မိနဈစာလောကျ record လုပျပါ။ ပွနျနားထောငျပါ။ ကိုယျလိုအပျနတေဲ့ အရာတှကေို ပွငျပါ။
Day 29 : Native speakersတှနေဲ့ အပွနျအလှနျစကားပွောပါ။
Day 30 : day 30 ရောကျရငျတော့ အခုလုပျခဲ့တဲ့ Challengeကသငျ့အပျေါ ဘယျလောကျထိ အကြိုး သကျရောကျမှုရှိတယျ၊ သငျလလေ့ာနတေဲ့ ဘာသာစကား စှမျးရညျ ဘယျလောကျတိုးတကျမှုရှိတယျဆိုတာ တှကေို ခရြေးလိုကျပါတော့….
အခုပွောပွပေးခဲ့တာကတော့.. ဘာသာစကားသငျယူလလေ့ာနသေူတှအေတှကျ အထောကျ အကူဖွဈစမေယျ့ ရကျ ၃၀ စာ challenge လေးပဲဖွဈပါတယျ။ အာလုံးအတှကျ အသုံးဝငျပွီး Challengeလေး ပွီးမွောကျကွပါစလေို့ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ။
Read times Last modified on Monday, 24 February 2020 15:46